Foils Copper Rolled, Foil Copper Electrolytic, Sheet Coil - Civen
Khabiirkaaga samaynta qalabka birta iyo alaabtiisa la xidhiidha.
Qalabka birta oo tayo sare leh oo deggan si badeecadaadu u noqoto mid tartan badan.
Had iyo jeer waxaan ku haynaa geesaheena kor iyo cusboonaysiinta nafteena.
Sida loola xiriiro?
Badeecadaheena waxaa qaatay shirkadaha ugu caansan adduunka oo dhan.
2L Laminate Colad Copper debecsan
Daaweeyey RA -bireed Copper
Waxaa hagaya suuqa, oo damaanad qaaday tayada.
Ka gudub nafteena oo raac heer sare!
Marna ha siin shaqada maanta berri
Iskaashi daacad ah, hal -abuurnimo iyo loolan mustaqbalka.
In ka badan 20 sano oo waayo -aragnimo ah
CIVEN METAL oo la aasaasay 1998. Waxaan ka shaqeynaa horumarinta, soo saarista iyo wareejinta qalabka macdanta.
Iyada oo ay shirkaddu si caafimaad leh u horumarinayso, waxaan ku qalabaynnaa qalabyada wax-soo-saarka oo horumarsan iyo aaladaha cabbiraadda tiknoolajiyadda sare. Waxaan si joogto ah u hagaajineynaa farsamadeenna iyo tas -hiilaadkeenna si aan u sii wadno ka shaqaynta warshadan.
Awood R & D aad u fiican
Qeybtayada R&D waxay ka shaqeyneysay horumarinta agabyo cusub oo macdan ah si kor loogu qaado kartida asaasiga ah ee shirkadda.
Dhammaan badeecadaha aan iibino waa shahaado
Mugga iibka ayaa la dhigaa
Fadlan nala soo xiriir hadda
Waxaan ka shaqeynaa horumarinta
soo saarista iyo wareejinta qalabka macdanta.
Fadlan noo dhaaf oo waxaan la xiriiri doonaa 24hours gudahood.
Waa maxay bireedka naxaasta ee elektrolytigga ah (ED) iyo sidee loo sameeyaa?
Qalabka biraha elektrolytic -ka ah, bireedka qaabaysan ee bir -qaabaysan, ayaa guud ahaan la sheegay in lagu soo saaray habab kiimiko ah, habka soo -saarkiisa sida soo socota: Kala -dirid: Xaashka naxaasta ah ee alaabta ceeriin ah ayaa la geliyaa xalka sulfuric acid si loo soo saaro sulfur naxaas ah ...
Waa maxay farqiga u dhexeeya bireedka naxaasta ee elektrolytigga (ED) iyo bireedka naxaasta ah ee la duubay (RA)
ITEM ED RA Astaamaha Geedi socodka process Habka waxsoosaarka structure Qaab dhismeedka Crystal range Kala duwan dhumucdiis
Agoosto 13, 2021
Geeddi -socodka Warshadaynta bireed ee Warshadda
Iyada oo leh rafcaan sare oo ku aaddan badeecooyin badan oo warshadeed, naxaas waxaa loo arkaa inay tahay wax aad u badan. Foils -ka naxaasta ah waxaa lagu soo saaraa habab wax -soo -saar oo aad u gaar ah oo ku dhex jira weelka -bireedka oo ay ku jiraan duubitaan kulul iyo qabow labadaba. Iyada oo ay weheliso aluminium, naxaas ayaa si ballaaran loo ...
Luulyo 08, 2021
Civen wuxuu kugu casuumay bandhigga （PCIM Europe2019）
Ku saabsan PCIM Europe2019 Warshadaha Korontada Korontada waxay ku kulmayeen Nuremberg ilaa 1979. Bandhigga iyo shirku waa hormuudka caalamiga ah ee soo bandhigaya badeecadaha hadda jira, mowduucyada iyo isbeddellada korantada korontada iyo codsiyada. Halkan waxaad ka heli kartaa o ...
Covid-19 ma ku badbaadi karaa meelaha naxaasta ah?
Copper waa walxaha ugu fiican ee jeermiska dila ee dusha. Kumanaan sano, muddo dheer ka hor intaanay garanayn jeermiska ama fayrasyada, dadku waxay yaqaanaan awoodaha jeermis -dilaha ee naxaasta ah. Isticmaalkii ugu horreeyay ee la duubay ee naxaas loo isticmaalo sida fayraska ...
Waa maxay duubista (RA) bireedka naxaasta iyo sida loo sameeyo?
Muraayad naxaas ah oo la duudduubay, bireed qaab -dhismeed qaabaysan oo qaabaysan, ayaa la soo saaray oo lagu soo saaray habka duubista jirka, habka soo -saarkeeda sida soo socota: Soo -saaridda: Alaabta ceeriin waxaa lagu shubaa foorno dhalaalaysa t ...